နားခိုရာ: Bonsai ရောဂါ
ကိုယ်က သစ်ပင် ပန်းပင်လေးတွေစိုက်တာ ၀ါသနာပါတယ်။ အရင်အိမ်တွေတုန်းက သစ်ခွတွေ ပန်းပင်တွေ တော်တော်လေးစိုက်ဖူးတယ်။ လွိုင်ကော်မှာ ၅နှစ်နီးပါးနေခဲ့တဲ့ကာလကတည်းက ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက စိုက်တာပျိုးတာနဲ့ အကျွမ်းဝင်ပြီးသားဗျ။ အခုလဲ အိမ်နဲ့ ကန်တော်ကြီးမြေပဒေသာနဲ့ နီးနေတော့ မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ အယားပြေ စိုက်ဖို့ Bonsai လေးနှစ်ပင်ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ပင်က အိမ်မှာထားဖို့၊ တစ်ပင်က ရုံးမှာထားဖို့။
ဘာပင်တွေလဲလို့တော့မမေးနဲ့ မသိဘူး။ မျောက်ပေပင်ပေါ့ ..... :D
ဒီ Bonsai နှစ်ပင် မ၀ယ်ခင်က (သားသားမမွေးခင်) အိမ်မှာ သစ်ပင်စိုက်ကြမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ လင်မယား နှစ်ယောက် ကွက်ကြားကွက်ကြား ဂမုန်းပင်တစ်ပင်ရယ်၊ lucky ဆိုပြီး ရောင်းတဲ့ အရွက်ရှည်ရှည် အပင် သုံးပင်ပါတဲ့ အိုးတစ်အိုးရယ် ၀ယ်ထားပြီးသား။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး Bonsai စိုက်ချင်တဲ့ ရောဂါ ပြန်ပေါ်လာလို့။
အရင်ကလည်း Bonsai ပင်လေးတွေဖြစ်အောင် စိုက်ကြည့်ဖူးတယ်။ ပထမဦးဆုံးတစ်ခါက ထင်းရှူးပင် လိုလိုအပင်လေး။ အဖေ့မိတ်ဆွေ ဗိုလ်မှူးရင်မောင်လက်ဆောင်ပေးထားတာ။ အဲဒါလေးကို ဘွန်ဆိုင်း လုပ်ဖြစ်သွားတာ။ သစ်ခွပန်တွေစိုက်တာ၊ ဘွန်ဆိုင်းပင်လုပ်တာတွေကို ဦးရင်မောင်က သင်ပေး တယ်လေ။ အဲဒီထင်းရှူးလိုလိုအပင်လေးက ၁၀နှစ်လောက်ကျော်မှ အိုးထဲ ပုရွက်ဆိတ်တွေဝင်ပြီး သေသွားတာ။
နောက်တစ်ခါ .. ညီမအလတ် ပန်းအိုးတစ်ခုထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ မန်ကျည်းပင်လေးကို ဘွန်ဆိုင်းလုပ်တာ။ ပန်းအိုးထဲကနှုတ်၊ ရေသောက်မြစ်ကို ဖြတ်၊ အမြစ်တွေ အကိုင်းတွေထဲက အချို့ကို ဖြတ်၊ ကြေးနန်းကြိုးနဲ့ ပင်စည်၊ အကိုင်းတွေကို ပုံသွင်း.. လုပ်ထားလိုက်တာ။ ၄၊၅ နှစ်သက်တမ်းရှိလာတယ်။ ဘွန်ဆိုင်းဆိုပေမဲ့ အပင်က သိပ်မပုတော့ မပုဘူး။ အမြင့်တစ်ပေလောက်တော့ရှိတယ်။ ပင်စည်ကလည်း အခါက်တွေ၊ အပွေးတွေနဲ့ တော်တော့်ကို လှလာပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးစွာနဲ့ အဲဒီအပင်လဲသေသွားတယ်။
အမေ အငြိမ်းစားယူတော့ အကောက်ခွန်အရာရှိရိပ်သာကနေ ခေတ္တငှားနေရတဲ့ ၅၁လမ်းကတိုက်ခန်းလေးကို အပြောင်းမှာ Customs တိုက်က အမေ့တပည့်တစ်ယောက်အိမ်မှာ ခဏအပ်ထားခဲ့တာ။ ကိုယ်တွေကလည်း အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ တိုက်ခန်း ပြင်ဆင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်ပြီး မန်ကျည်းပင်ကို သတိမေ့သွားတယ်။ သူတို့ကလည်း ၀ရံတာမှာထားပြီး လုံးဝကိုမေ့ထားပါသတဲ့။ သေပါလေရော ...နှမျောလိုက်တာ။
Bonsai စိုက်ရတဲ့ feeling က မိုက်တယ်။ စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်။ long term ကို ကြည့်ရတယ်။ Sustain လုပ်တဲ့ ability ကိုယ့်မှာ ကျင့်ယူကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲခံစားရတယ်။ စိတ်ကူးပေါက်တုန်းထလုပ် ပြီးရင် ပစ်ထားလို့ ရတဲ့ဟာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အမြဲပုံမှန်နဲ့ ရေရှည်လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုး။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
အစေ့ကနေပျိုးပြီး Bonsai မန်ကျည်းပင်လေး သုံးလေးပင်လောက် ထပ်စိုက်ကြည့်ဦးမယ်။ :)
Posted by little moon at 3:00 PM
အား... comment အရှည်ကြီး ရေးပြီး sumbit လုပ်လိုက်တာ.. လိုင်းပြတ်သွားတာနဲ့ ဘာမှ မပေါ်တော့ဘူး. ရှိပါစေတော့
တစ်စုံတစ်ခု ရေးသွားပါတယ် လို့သာ သဘောထားလိုက်ပါ.။
တစ်စုံတစ်ခု ... တစ်စုံဆိုရင် နှစ်ခုလေ။ ဘာလို့တစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့် ... လိုင်းပြတ်တုံးက တစ်ခု ကျပျောက်သွားတာဖြစ်မယ် ... ဘာတွေအများကြီးရေးသွားပါလိမ့် +- x / * & % $#@ ....
အရမ်းစိတ်ရှည်ဖို့ လိုမယ်။ စိုက်ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးတယ် ဆိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။ တို့တောင် စိတ်တောင် မကူးရဲ၊ တို့စိတ်နဲ့ မကိုက်ပါဘူးလေ..
အဲ့သလို စိတ်ရှည်မယ့်သူလို့ မထင်ထားဘူး။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ။
တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် သစ်ပင်စိုက်တဲ့..
စိုက်သာ စိုက် အစ်ကိုရေ..
မိသားစုလေး နေကောင်း ကျန်းမာကြပါစေ...
သေသွားတဲ့ မန်ကျည်းပင်လေး နှမျောစရာ
အဲဒါ သီးပင် လေ.။ အညာဘက်မှာပေါတယ်။
သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ် အရွက်ကိုက သေးတယ်၊ နောက်ပြီး အပင်ကြီးမျိုးလဲ ဖြစ်တော့ ဘွန်ဆိုင်းလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပေါ့။
စိတ်ဝင်စားမလားလို့ ပုံကလေးမိုက်တယ်ဗျ.။အနုပညာကို ခံစားတတ်သူချင်းမို့လို့မျှတာပါဗျာ။
Bonsai ကို လုပ်ယူလို့ရတာ တစ်ခါမှ မသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီနယ်ပယ်ကို တစ်ခါမှ မကျွမ်းဝင်ဖူးတာ။ အခုမှ ကိုလကလေး ပြောမှ သိရတော့တယ်ဗျာ။
တော်တယ်။ အနုပညာလက်ပေါ့..။ မထင်မိဘူး. (မြှောက်ပြောသွားသည်။ )
ကောင်းတယ် ဆက်လုပ်ပါ. အားပေးသွားသည်..ပြီးရင် လဲတိုးတက်မှူကလေးတွေပြပါ။